इटालियन ब्राण्ड `बनेली´ का मोटरसाइकल आऊँदै, कति पर्ला मूल्य? - Jagaran Post
Home/अर्थ बजार/इटालियन ब्राण्ड `बनेली´ का मोटरसाइकल आऊँदै, कति पर्ला मूल्य?
इटालियन ब्राण्ड बेनेली दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन उत्पादनको लागि निकै चर्चित रहेको छ । कम्पनीले प्रिमियम मोटरसाइकलदेखि कम्यूटर सेग्मेन्टको मोटरसाइकल उत्पादनमा आफुलाई प्रमाणित गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले उत्पादन गरेका अधिकांस उत्पादन नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध रहेको छ । नेपालमा बेनेलीका मोटरसाइकल २ लाख ३० हजारदेखि २१ लाख रुपैयाँसम्ममा किन्न पाईन्छ । यस्तोमा कम्पनीले ल्याएको पछिल्लो उत्पादन ‘बेनेली १८० एस’ नेपाली बजारमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने जिज्ञासा उपभोक्तामा रहेको पाइन्छ ।
झट्टहेर्दा निकै प्रिमियम देखिने यो मोटरसाइकल कम तौल, उच्च पावर र आकर्षक बनावटको कारण चर्चामा रहेको हो । यस्तोमा नेपाली बजारमा यो मोटरसाइकल आउँछ वा आउँदैन भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।
बेनेलीको नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता केटीएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङ प्रालिमा बुझदा यो मोटरसाइकल नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको थियो । तर, तयारी कै बीचमा कोरोना भाइरसको कारण विपरीत समय सृजना भएकाले यो मोटरसाइकल सम्भवत भदौमा हुने नाडा अटो शो २०२० सम्ममा नेपाल आउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले यसमा १७५.३ सीसी क्षमताको सिंगल सिलिण्डर, ४ भल्भ, लिक्विड कुल्ड, एफआई इन्जिन दिएको छ ।
रेस इन्सपिरेसन च्याचिस डिजाइनमा आधारित यस मोटरसाइकलमा रहेको इन्जिनले ९५०० आरपीएममा अधिकतम १८ बीएच पावर र ७००० आरपीएममा १४ एनएम टर्क प्रदान गर्छ ।
कम्पनीले यसको अगाडि इन्भर्टेड टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन दिएको छ भने पछाडि मोनोसक दिएको छ । सुरक्षाको लागि दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक उपलब्ध यो मोटरसाइकलमा अगाडि २६० एमएमको डिस्क र पछाडि २२० एमएमको डिस्क ब्रेक दिइएको छ ।
१७० एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स उपलब्ध यो मोटरसाइकलमा १३४५ एमएमको ह्वीलवेस र १० लिटर क्षमताको इन्धन ट्याङ्क दिइएको छ ।
यदि यो मोटरसाइकल नेपाली बजारमा आउने हो भने यसको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ भन्दा केही बढी पर्ने देखिन्छ ।
कुलमानको आग्रह: ग्यांसको लाईनमा नबस्नुहोस, बिजुली प्रयोग गर्नुहोस
२०७६ चैत्र ४, मंगलवार १५:२७ गते
नेपाललाई विश्व बैंकको तीन अर्ब बढी सहयोग
२०७६ चैत्र २६, बुधबार १०:५७ गते
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम: ५ अर्वले नपुगेर थप १३ अर्व ऋण लिंदै सरकार
२०७६ श्रावण १४, मंगलवार १६:०२ गते